ဂယာ _ ဗာရာဏသီ နှင့် ရာဇဂြိုလ် (5D/4N)KH - 8001 E
ဂယာ အားရောက်ပြီးသူများအတွက် နှင့်ရက်တိုသွားချင်သူများအတွက် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Day : 1 Yangon - Gaya (Lunch & Dinner)(ပွင့်)
ရန်ကုန်မှလေယာဉ်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသော ဂယာသို့ရောက်ရှိပြီး ဦးစွာBC၃ရာစုနှစ်က သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးတည်ထားခဲ့သော မဟာဗောဓိစေတီ နှင့် ဗောဓိညောင်ပင် သို့သွားပါမည်။ ပြီးလျှင် ရွှေခွက်ကိုအဓိဌာန်ဖြင့် မျှောခဲ့သော နေရဉ္စရာမြစ်၊ မြတ်စွာဘုရားအား ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့သော သုဇာတာ အတွက်တည်ခဲ့သည့် သုဇာတာစေတီတို့ကိုသွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီး Bodhagaya Regency Hotel တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :2Bodhgaya – Varanasi (ဗာရာဏသီ) (Breakfast, Lunch & Dinner)(ဟော)
Hotelတွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဗာရာဏသီသို့ ထွက်ခွာပါမည်။ ၅နာရီနှင့်၆နာရီကြား ကားမောင်းနှင်ပြီး ဗာရာဏသီသို့ရောက်ရှိကာ Hotel Check in ၀င်ပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင် တရားဦးဓမ္မစင်္ကြာဟောတော်မူခဲ့သော မိဂဒါဝုန်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်။ ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရား ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူပြီး ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးမှ ခရီးဦးကြိုဆိုသော နေရာတွင်တည်ခဲ့သော ချောက်ခဏ္ဍီစေတီ၊ ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦးဟောရာနေရာတွင်တည်ခဲ့သောဓမ္ဓရာဇိကစေတီသို့သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။BC၃ရာစုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့ခံစားတွေ့မြင်ရမည့်ရှေးဟောင်းသူ့တေသနပြတိုက်သို့သွားရောက်လည် ပတ်ပါမည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာများကို သေသပ်လှပစွာခြယ်မှုံးထားသော နံရံဆေးရေးပန်းချီများကို တွေ့မြင်နိုင်သည့် မူလဂန္ဒာကုတ္တိဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ပြီးလျှင်ညစာသုံး ဆောင်ကာ Grape Vine Hotelတွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Varanasi (ဗာရာဏသီ) – Bodhgaya (Breakfast, Lunch & Dinner)
Day :4Bodhgaya - Rajgir (ရာဇဂြိုလ်) (Breakfast, Lunch & Dinner)
Hotel တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ကားဖြင့် ၄နာရီ မှ ၅ နာရီဝန်းကျင်မောင်းနှင်ပြီး ရာဇဂြိုလ် သို့သွားပါ မည်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကောင်းမွန်လှသည့် ဗိမ္ဗိသာရမင်းစိုးစံသောတိုင်းပြည် ရာဇဂြိုလ်ပြည်ကို လှည့်လည်ကြည့်ရူ့ပါမည်။ ထို့နောက်ရတနာင်္ဂီရိတောင်ထိပ်က “၀ိရွှသျှ န္တီစေတီ” ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီ ကိုဖူးမျှော်ရပါမည်။ သာသနာတော်၂၅၀၀ ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော် (Nipponza Myohoji ) အရှင်ဖီဂျီကတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ စေတီတော်ရဲ့လေးမျက်နှာမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင့်ရဲ့ ဖွား ၊ ပွင့် ၊ ဟော၊စံ သံဝေဇနိယလေးဌာနကို ထွင်းထုပူဇော်ထားပါတယ်၊ စေတီတော်၏အရှေ့ဘက်နားတွင် မြတ်စွာဘုရား မိုးတွင်းကာလတွင်တရားဟောပြောရာနှင့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ရာ နေရာဝိဇျွကုဋ်တောင်ထပ်ရှိ ကျောင်းတော်ရာ၊မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီး လှူတန်းခဲ့သော ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်၊ထို့မှနာလန္ဒာမြို့မှ နာဂအဇ္ဈနဆရာတော် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်သို့သွားပါမည်။ အေဒီ ၅ရာစုမှ ၁၂ရာစုအထိနှစ်ပေါင်း (၇၀၀) ကျော်တည်ရှိခဲ့သည့်ရှေးယခင်က ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့သောကျောင်းတော်ကြီး၏ မီးရှို့ခံရပြီးကျန်ရှိနေသော နေရာများအားလွမ်းဆွတ်ဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်ပါမည်။ ထို့နောက်ယခုအသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ထားသော နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်အသစ်သို့ သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး ကားဖြင့်၎နာရီမှ၅နာရီကြားမောင်းနှင်ကာ ဂါယာသို့ပြန်ပါမည်။
Day :5Bodhgaya - Yangon (Breakfast)
Hotel တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး မဟာဗောဓိစေတီနှင့်ဗောဓိညောင်ပင်သို့သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ထို့နောက် ဂါယာပြန်အမှတ်တရလက်ဆောင်များဝယ်ကာ လေဆိပ်သို့ထွက်ခွာပြီး ရန်ကုန်သို့ပြန်ပါမည်။
1.4Star Hotel accommodation for 4night with twin sharing basis
2. International flight fare
3. Myanmar Tour Leader
5. Transportation as mention in the itinerary
7. Entrance & Zone fees as in itinerary